zvimwe Towers Manufacturers - China other Towers Factory, Suppliers
A microwave tower inonziwo microwave communication tower. Ishongwe yesimbi inotsigira parabolic antenna. Iyo inonyanya kushandiswa kune zvemagetsi masisitimu eiyo microwave kutapurirana uye kugamuchira. Inowanzoiswa panzvimbo yakakwirira zvikuru. Iyo microwave tower kazhinji chimiro chesimbi. Microwave nhaurirano shongwe dzinowanzorembera yakananga antenna (plate-shaped) kana omnidirectional antennas (tsvimbo-yakaita) antennas, anozivikanwawo seshongwe dzekutaurirana. Microwave communica...
yakazara telecom tower
Telecommunication tower kana Wi-Fi tower, TV tower radio tower inowanzoita marefu masimbi zvimiro zvakagadzirirwa kutsigira antenna ekutepfenyura uye kufonera, kusanganisira terevhizheni. Kune maviri makuru anotsigira marudzi: kuzvitsigira uye guyed zvimiro. Sokunge shongwe yemutsetse, iyo inonyanya kufarirwa mhando ingirozi simbi shongwe. XY Tower inopa marudzi enhare dzenhare.
Chigadzirwa chedu chinofukidza shongwe yepadenga kusvika 60m yakakwirira telecom shongwe. Nepo sarudzo dzemhando dzenharembozha dzakawanda kupfuura shongwe dzemitsetse. Semuenzaniso, monopole tower, tubular steel tower, angle steel tower, end etc. Tinogona kupa mhinduro yakazara, kusanganisira mifananidzo uye zvigadzirwa zve telecom tower kune vatengi vedu.